Ity Andrim-panjakana ity ihany no afaka mamoaka ny voka-pifidianana ofisialy. Niaina tao anatin`ny fitoniana ny vahoaka Malagasy tamin`ny fiandrasana izay, hoy i Maka Alphonse filohan`ny Filankevitry ny fampihavanana Malagasy. Hiroso amin`ny dingana manaraka ny CFM ka hangataka fihaonana amin`ny kandidà hisian’ny fitoniana. Nohamafisiny kosa fa maro ireo tsy fahatomombanana tamin`ny fanomanana iny fifidianana iny. Aoka ny rafi-panjakana manomana azy mba hisintona lesona tamin`ny fihodinana voalohany. Ohatra noraisin`ny filohan`ny HCC, Jean Eric Rakotoarisoa ireo karatra tsy voazara. Azo sorohana anefa izany, hoy ny filohan`ny CFM. Notsindriany hatrany fa tsy azo ivalozana ny didim-pitsarana na ny fanapahana noraisin`ny HCC fa kosa miandrandra fitoniana hatrany ho an`ny firenena.